Home Wararka Dibada Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo shir uga qeyb galaya dalka Jabuuti
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo shir uga qeyb galaya dalka Jabuuti
Xubno ka tirsan Guddiga Madaxa Bannaan ee la-dagaalanka Musuqmaasuqa oo uu hoggaaminayo Khadar Axmed Diiriye kuna wehliyo safarka Cabdullaahi Abuukar ayaa u ambabaxay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti si ay uga qeyb galaan Shirweynaha 8-aad ee Caalamiga ah ee looga hadlayo Dowlad-wanaagga iyo waxqabadka hay’adaha dowliga ah iyo ladagaalanka musuqa.
Shirka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Madasha Afrika ee la dagaalanka Musuq-maasuqa, iyo Hay’adaha Isku-dhafka ah (FIGE), Xafiiska ladagaalanka musuqa ee EU iyo Xafiiska Kormeeraha Guud ee Jamhuuriyadda Jabuuti .
Shirkan oo ka dhici doona Caasimadda Djibouti inta udhaxeysa 7–9 bisha Juun ayaa waxaa kasoo qeyb gali doona wufuud caalami ah oo ka kala socota Dalalka Ururka Hay’adaha isku-dhafka ah ee (FIGE), Madaxda Guddiyada La-dagaalanka Musuq-Maasuqa ee Bariga Afrika, Galbeedka iyo Bartamaha Afrika iyo Khubaro kale oo Caalami ah, waxaana daah furi doona Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Soomaaliya ayaa ah markii ugu horeysay oo ay xubin ka noqotay Ururka FIGE kana qeyb gasho shirweynahan, waxaana wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda ka qeyb galeysa shirkaas.
Previous articleDawladda Turkiga ayaa ku celisay shuruudo adag oo ay ku xirtay inay ogolaato in Sweden ay ku biirto gaashaanbuurta NATO.
Next articleDeni, ayaa maanta xarunta Wasaaradda Maaliyadda Puntland ku daah-furay shirka dib-u-eegista Dakhliga guud iyo Kor u qaadista wax soo saarka Dowladda Puntland.